सगरमाथाको चुचुरोमा पुग्नु त्यतिबेला चानचुने कुरा थिएन । सगरमाथाको सफल आरोहणपछि उनीहरू सम्पूर्ण विश्वको केन्द्र बन्न पुगे । विश्वभरका मुख्य मुख्य पत्रिका र टेलिभिजनका क्यामेरा यी दुई पर्वतारोहीतर्फ तेर्सिए । नेपाली माटोमा हुर्के, बढेको ठिटोले इतिहास रचेको घटनाले नेपाली स्वाभिमानलाई ह्वात्तै माथि पुर्‍याएको थियो । तर, हिलारीले तेन्जिङलाई ‘यो पर्वतारोही होइन, भरिया हो’ भनी होच्याएको प्रसंगले नेपालीको मनमा आक्रोश पनि चुलिएको थियो ।
तेन्जिङ र हिलारी सगरमाथाबाट फर्किएपछि स्वागत गर्न काठमाडौंबाट धुलिखेलतर्फ मानिसको लर्को लागेको थियो । तेन्जिङका लागि भनेर दौरा सुरुवाल र माला लगिएको थियो । स्वागत टोलीले धुलिखेलमा तेन्जिङलाई माला लगाइदिँदै भनेको थियो, ‘अब तपाईंलाई देशविदेशका पत्रकारले अनेक प्रश्न सोध्नेछन् । म सगरमाथाको चुचुरोमा पुगेर आएको हुँ भन्नुहोला ।’ स्वागत टोलीले यसो भन्नासाथ तेन्जिङले रिसाएर माला चुँडाउन खोज्दै भनेका थिए, ‘उता हिलारी सा’बले म चुचुरोमा पुगिनँ भन्नु भन्नुभएको छ । तपाईंहरूचाहिँ पुगेँ भन् भन्नुहुन्छ । मलाई किन अप्ठयारोमा पारेको सबैले !’ तेन्जिङको यस्तो अबोध कुरा सुनेर हिलारीप्रति सबै आक्रोशित भएका थिए ।
नेपाल र भारतबीच तेन्जिङ कुन राष्ट्रको नागरिक हुन् भन्नेमा रस्साकस्सी चलिरहेको थियो । सोलुखुम्बुमा हुर्के, बढेका तेन्जिङ स्वत: नेपाली भएको नेपाली पक्षको तर्क थियो । जिविकोपार्जनका क्रममा नेपालबाट दार्जिलिङ गएर उतै काम गरी बसेकाले तेन्जिङ भारतीय नागरिक रहेको भारतीय पक्षको दाबी थियो । कामका सिलसिलामा जहाँ पुगिन्छ, त्यो नै आफ्नो देश कसरी हुन्छ भन्ने नेपालीको प्रश्नको चित्तबुझ्दो जवाफ दिन नसके पनि भारतीय सञ्चारमाध्यमले तेन्जिङलाई भारतको शान र गौरब बताउन छाडेको थिएन ।
जुन २८, सन् १९५३ मा तेन्जिङ नयाँदिल्लीको विमानस्थलमा ओर्लिए । तेन्जिङको स्वागत गर्न हजारौँ मानिस एयरपोर्ट पुगेका थिए । समाचार संकलनका लागि सयौँ पत्रकार पुगे । उनलाई ‘रिसिभ’ गर्न भारतीय विदेश मन्त्रालयका शिष्टाचार माहापाल र विदेश तथा गृह मन्त्रालयका ज्वाइन्ट सेक्रेटरी विमानस्थल पुगेका थिए । भारतस्थित बेलायती हाइ कमिशनका कायममुकायम हाइकमिशनर र अन्य अफिसर पनि पुगेका थिए । दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासबाट राजदूत विजयशमशेरलगायत सबै अधिकारी तेन्जिङलाई लिन पुगेका थिए ।
तेन्जिङ दिल्ली पुगेकै दिन भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले एडमन्ड हिलारीको सम्मानमा रिसेप्सन आयोजना गरेका थिए । नेपाली दूतावासका कर्मचारीलाई पनि बोलाइएको थियो । तेन्जिङसँग भेटघाट र कुराकानी गर्न पाउँदा नेहरू त्यसै त्यसै प्रसन्न देखिन्थे ।
रिसेप्सन पार्टीमा नेहरूले नेपाली राजदूत विजयशमशेरलाई सोधे, ‘यो नेसनालिटीको विवाद के हो ? कुरा कहाँबाट उठ्यो ? यस्ता फाल्तु कुरामा मलाई विश्वास छैन् ।’
तेन्जिङ दिल्ली आइपुगेकै दिन भारतीय नेता मौलाना अब्दुल कलाम आजादले आफ्ना सेक्रेटेरीलाई तेन्जिङसँग भेट्न पठाए । सेक्रेटेरीमार्फत तेन्जिङलाई आजादले भने, ‘तपाईंले बेलायत भ्रमण गर्नु राम्रो हुन्छ ।’ राजदूत विजयसँग पनि आजादले यस्तै कुरा गरे । राजदूतलाई बोलाएर आजादले भने, ‘तेन्जिङ र हिलारीबीच मनोमालिन्य भएको कुरा पत्रपत्रिकाले लेखिरहेका छन् । यस्तोमा तेन्जिङ बेलायत नगई दार्जिलिङतिर लागे भने छायामा पर्नसक्छन् । पछि बेलायत जाँदा बेलायत सरकारले त्यति कदर नगर्न सक्छ । त्यसैले उनलाई अहिल्यै पठाउन पहल गर्नुभयो भने बेस हुन्छजस्तो मलाई लागेको छ । प्राइममिनिस्टर (नेहरू)को राय पनि यस्तै छ ।’
नेपाली दूतावासका अधिकारीहरूले पनि तेन्जिङलाई बेलायत भ्रमण गर्न उक्साए । सबैको आग्रहपछि तेन्जिङ तयार भए । तर, श्रीमती र छोरीहरूलाई पनि सँगै लैजान पाउनुपर्ने शर्त राखे । यसमा असहमति जनाउन कसैले आवश्यक ठानेन ।
‘तेन्जिङ महोदय नेपालमा जन्मी, त्यहीँ हुर्कि–बढी, जिविका चलाउन भारत पस्नुभएको हो । नेपालमा उहाँकी आमा अझै जिवित हुनुहुन्छ, उहाँको घर अहिले पनि छ । फेरि उहाँले नेपाली नागरिकता त्याग्नु पनि भएको छैन् । तर, तेन्जिङ विगत १५/२० वर्षदेखि दार्जिलिङमा बसोबास गर्दै आएको पनि सत्य हो,’ विजयशमशेरले नेहरूलाई भने ।
तेन्जिङलाई बेलायत पठाउने तयारी सुरु भइसकेको थियो । तर, तेन्जिङचाहिँ अझै पनि पहिले दार्जिलिङ गएर त्यसपछि मात्रै बेलायत जान चाहन्थे । सबैले कर गरेपछि तेन्जिङले पहिले दार्जिलिङ जाने मोह त्यागिदिए । तर, आफ्ना सहयोगी लाक्पालाई पनि सँगै पठाउनुपर्छ भन्ने नयाँ शर्त राखे ।
‘ठीकै छ । तर, हिन्दुस्तानको पासपोर्ट लिएर गए ठाउँठाउँमा हाम्रा मिशन भएकाले तेन्जिङलाई सबै प्रकारको सुविधा उपलब्ध हुने थियो…।’
जवाफमा विजयशमशेरले भने, ‘हाम्रो प्रतिनिधि अथवा मिशन नभएका ठाउँमा नेपाली पासपोर्ट लिई जाने व्यक्तिलाई त्यहाँ रहेका भारतीय मिशनबाट सहयोग हुँदै आएको छ । यही सहयोग तेन्जिङलाई गरे पुगिहाल्छ ।’
‘ठीक छ,’ केहीबेरको मौनता चिर्दै नेहरूले सोधे, ‘अनि तेन्जिङलाई नयाँ लुगा पनि चाहिएला नि । अत्यावश्यक लुगाफाटो र सामग्री यतैबाटै पठाइदिनुस् । बाँकी बेलायतमै किन्ने बन्दोबस्त म मिलाइदिन्छु । बेलायतमा रहुन्जेल तेन्जिङ भारतीय हाइ कमिशनको पाहुना भएर बस्नेछन् ।’
विजयशमशेरले तेन्जिङका लागि एउटा कोट, एउटा पेन्ट, एउटा डिनर ज्याकेट, दुईवटा कमिज र एउटा ओभरकोट बनाउन सुचिकारलाई दूतावास बोलाए । तेन्जिङको तर्फबाट भिसाको फर्म भरेर डिप्लोम्याटिक पासपोर्टमा बेलायत र स्विट्जरल्यान्डको भिसा लगाइदिए ।
त्यसपछि उनले एकाएक अर्को शर्त तेर्साए । ‘नेपाली र हिन्दुस्तानी पासपोर्ट दुवै पाएँ भने लाक्पा नभए पनि हुन्छ,’ तेन्जिङले भने । तेन्जिङलाई यस्तो माग गर्न कसैले उकासेजस्तो देखिन्थ्यो । नत्र उनलाई दुइटा पासपोर्ट किन चाहियो ?
त्यही दिन बेलुका नेहरूले तेन्जिङलाई आफ्नो निवासमा बोलाएका थिए । आफ्ना केही पुराना लुगा तेन्जिङलाई उपहारस्वरूप दिन चाहेका थिए, उनले । भारतीय प्रधानमन्त्रीको पहिरनमा तेन्जिङलाई युरोपमा उतार्न पाए उनी भारतीय हुन् भन्ने प्रोपोगन्डा फैलाउन सजिलो हुन्छ भन्ठानेर यस्तो गरिएको हुनसक्थ्यो । पुराना कपडा लिन नेहरू निवास गएको मौकामा तेन्जिङले नेहरूसँग लाक्पालाई पनि आफूसँगै जान दिनुपर्ने माग राखेछन् । नेहरूले ‘हुन्छ’ भनेछन् । तेन्जिङ फुरुंग भए ।
अब त सबै झन्झट सकियो होला भन्ठानेका थिए, विजयशमशेरले । तर, केही बेरेपछि तेन्जिङ फेरि आए र अर्को माग तेर्साए ।
मातृकाप्रसाद कोइरालाको आत्मकथा ‘अ रोल इन अ रिभोल्युसन’मा संकलित पत्रलगायत स्रोतका आधारमा तयार पारिएको आलेख ।